चश्मा लगाउनुपर्ने आँखारोगीलाई लेजर पद्धतिबाट उपचार, के हो लेजर पद्धति ?
काठमाडौं,२६ असोज– आँखाको दृष्टिमा कमी भएर समस्या देखिएमा बिरामीले चश्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । आँखाको दृष्टिमा कमी हुँदा औषधिको प्रयोग, अप्रेसन र चश्माको प्रयोगबाट दृष्टि फर्काउन सकिन्छ ।
नेपालमा जनसंख्याको ३ प्रतिशत मानिसहरुले चश्मा लगाउनु पर्ने आँखाको समस्या रहेको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यक्रम निर्देशक नविन राइले बताए । ‘ आँखामा समस्या भएका कतिपय मानिसहरुले चश्मा प्रयोग नियमित गर्न सक्दैनन् । चश्मा हरायो,फुट्यो भने समयमै नयाँ चश्मा बनाउने पहँुच चस्मा प्रयोग कर्तामा हुँदैन । त्यसले पनि मानिसहरुले चश्मा लगाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् ।’
दृष्टि कमजोर भएर चश्मा लगाउनु पर्ने अवस्था भएका विरामीहरुले लेजरको पद्धतिबाट पनि चस्माको प्रयोग विना उपचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । चश्माको प्रयोग भन्दा लेजर पद्धतिबाट गरिने उपचार गुणात्माक हुने राईले बताए । सबै चश्मा लगाउने व्यक्तिलाई लेजरबाट अप्रेसन भने गर्न नपर्ने राइले जानकारी दिए ।
दुई आँखाको पावर २ दशमलब ५ भएमा लेजर पद्दतीबाट उपचार गर्न उपयुक्त हुने राईले बताए । आँखामा माइनस पावरको दृष्टि भएकाहरुको लागि लेजर पद्धतिबाट उपचार गर्न आवश्यक छ ।
के हो लेजर पद्धति
लेजर पद्धति भनेको ल्यासीक र स्माइल नाम गरेका दुई प्रविधि मार्फत आँखाको अप्रेशन गरेर नानीमा समान्य परिवर्तन गरिने उपचार पद्धति हो । तिलगंगा आँखा अस्पतालमा २००१ सालदेखि नेपालमा लेजर पद्धतिबाट आँखाको उपचार हुँदै आएको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. रोहित सैंजूले बताए । उनका अनुसार सन् २००१ देखि हालसम्म ४ हजार चस्मा लगाउनु पर्ने विरामीहरुले लेजर पद्धतिबाट उपचार गराइसकेका छन् ।
चस्मा भन्दा महंगो भएपनि दिर्घकालिन रुपमा भने यसको उपयोगिता प्रभावकारी रहेको डा. सैंजूको भनाइ छ । ‘लेजर पद्धतिको प्रविधि पनि महंगो छ । त्यसैले लेजरबाट उपचार गराउन महंगो त पर्छ तर अन्य देशहरुमा भन्दा नेपालमा निकै सस्तो छ । उनले लोकान्तरलाई भने,‘ लेजर पद्धतिबाट उपचार गर्न ८५ हजार खर्च लाग्छ । २० मिनेटमै यसको उपचार गराइन्छ । समान्य नेपालीहरुको लागि भने यो महंगो नै देखिन्छ ।’
सामान्य आयस्तर भएका नेपालीहरुका लागि यसको प्रयोग कम भएपनि विदेशमा बस्ने नेपालीको लागि भने लेजर पद्धतिबाट गरीने उपचार प्रभावकारी देखिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
सैंजुका अनुसार नेपाली मात्र नभएर विदेशी नागरिक पनि आँखाको उपचारका लागि तिलगंगा आउने गरेका छन् । विदेशमा भन्दा उपचार नेपाल सस्तो र गुणस्तरीयसमेत हुने भएपछि विदेशी उपचारका लागि आएका सैंजूको भनाइ छ । असोज २६, २०७४ मा प्रकाशित